Matraged matara mmiri na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Elu mmiri mmiri na-enye anyị nkwa na anyị na-enye onye ahịa ọ bụla na ngwaahịa dị elu gụnyere matraget marten zuru oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ, obi dị anyị ụtọ ịgwa gị.The ngwaahịa a anaghị agwọlata. Usoro izu ike na-enye akwa na-enye akwa iji gbapuo nke na ịbelata ihe ndị ahịa n'oge a na-enwe.